Lahatsary Telo Minitra Manazava Ny Ain-dehiben’ny Fitiavana Tanindrazan’ny ao Balkàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2017 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Ελληνικά, русский, Español, Italiano, polski, srpski, English
Graffiti (soratsoratra) ao Skopje, Makedonia mivaky hoe “Aretina ny Fitiavana Tanindrazana!” Rindrina kely iray mampiseho sarintany iray misy ireo ‘Foko ao Makedonia’ (mampiditra ho anaty kitapo iray ny Repoblikan'i Makedonia sy ireo faritanin'ireo firenena manodidina azy) ary ny hafatra hoe “Mivoady aminareo aho, hitambatra ianareo!” no simban'ilay graffiti. Photo by GV, CC-BY.
Latsaky ny telo minitra no nilain'ilay lahatsary iray novokarin'ny tariky ny gazetiboky ety anaty aterineto Balkon3 hanazavàny ireo hevi-dravina fototra ao anatin'ny resaka fitiavana tanindrazana goavana asehon'ny fanjakàna any amin'ny faritra Balkàna. Azo ampiharina be any amin'ireo firenena any ivelan'ny faritra ka mijaly noho ny fampiesonana vahoaka ataon'ny hery ankavanana ihany koa ireo lesona omeny.
1.Inoan'ireo firenena tsirairay ao Balkàna fa tokony ho goavana noho izao misy azy izao izy. Farafahakeliny dia mila isika vondronosy Balkàna iray hanomezana fahafahampo ny tsirairay.
2. Saingy tsy misy na iray aza amin'izy ireo mihevitra ny hifampàka zavatra avy amin'ny hafa. Fa ny fahitàn'izy ireo an'izany dia toy ny “fakàna ny tany izay efa azy ireo ihany”…
Ampahany anatin'ny andiany “Avelao Hataoko Sarisary Ho Anao” izay fandikàna ny fiteny Makedoniana (да ти нацртам) midika ara-bakiteny hoe “aleo hazavaiko amin'ny teny faran'izay tsotra.”
Nandritra ireo volana farany teo, nanatontosa lahatsary fohy maro ilay gazetiboky hanazavany ireo fotokevitra toy ny fanolorantena sivily, demaokrasia maoderna ary ny anjara asan'ireo antoko politika.
Ny teny hoe ‘balcony’ – lavarangana – no nakàna ny anarana Balkon3 ho an'ilay gazetiboky. Mpanao gazety avy any Makedonia, Gresy ary Tiorkia no nanangana azy, ary amin'ny teny Makedoniana, Grika, Albaniana, Tiorka sy Anglisy ny votoaty atolony, ikendreny ny hanakaran'ny rehetra ny atao hoe hamaroana / fifangaroanà kolontsaina. Ny teny fanevan'izy ireo dia “Atopazo ny masonao ho any an-tokotanin'ny mpifanolo-bodirindrina aminao, mivoaha eo an-davarangana.”
Raha toa taitran'ity lahatsary ity ny fahazotoanao homana hitady bebe kokoa fanehoankevitra avy ao an-toerana momba ny foto-pisainana sy kolontsaina ao Balkàna, jereo ny hira “No Escape (from Balkan”) amin'ny teny Anglisy, an'ilay tarika Bosniaka liam-pandrosoana Dubioza Kolektiv. Ny tononkira dia manondro ireo fitsaratsaràm-poana ao amin'ny faritra, araka izay nanazavan'ireo mpikambana avy amin'ny zanaka ampielezana azy taminà Tandrefana iray.